कोरोना म,हा,मा,री,पछि आउँदैछ फेरी अर्को यस्तो डरलाग्दो खतरा, जुन विश्वले वेवास्ता गरिरहेको छ – Everest Pati
कोरोना म,हा,मा,री,पछि आउँदैछ फेरी अर्को यस्तो डरलाग्दो खतरा, जुन विश्वले वेवास्ता गरिरहेको छ
कोरोना भाइरसको महामारीको शि,का,र भएपछि विश्वका मानिसहरूले अर्को ख,त,रा बिर्सिरहेका छन् र त्यो ख,त,रा भनेको कोरोना भाइरसको सं,क,ट,पछि विश्वमा तीब्र रुपमा उदय भइरहेको रोबोटको प्रयोग हो। विश्लेषकहरू भन्छन् कि यो राम्रो भइरहेको छ या नराम्रो। तर यो सत्य हो, धेरै प्रकारका रोजगारमा रोबोटले मानिसको ठाउँ लिइरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटले यस्तो प्रयास झन् बढ्दै गइरहेको छ।
उनी भन्छन्, ‘मानिसहरु त्यस्तो ठाउँमा जान मन पराउने छन् जहाँ मानिसको भिड कम होस्। किनभने त्यस्तो ठाउँमा उनीहरुले आफूलाई कम जोखिम महसुस गर्नेछन्।’ मानिस सरह हुन सक्छ रोबोट? मानिसलाई दिशानिर्देश गर्ने खालका सेवामा पनि रोवटको प्रयोग हुन सक्छ? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास यस्तो तरिकाले भइरहेको छ कि यसले विद्यालयमा शिक्षक, फिटनेस प्रशिक्षक र वित्तीय मामिलामा सल्लाह दिने ठाउँ पनि लिन सक्दछ। प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग बढाइरहेका छन्।
विशेषज्ञ म्याककिन्सीले सन् २०१७ को एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेको अनुमान अनुसार अमेरिकामा एक तिहाइ कामदारले २०३० सम्ममा अटोमेसिन र रोबोटका कारण आफ्नो जागिर गुमाउनेछन्। महामारीको समयमा त्यस्तो शक्तिको विकास हुन्छ कि जसले समयको सबै निर्धारित सीमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। मानिसले अब यो संसारमा यस प्रविधिसँग कसरी तालमेल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्वयं उसैमा भर पर्छ। बीबीसी हिन्दीबाट